SF လေကြောင်းလိုင်းက “၁၁၁၁” ဈေးဝယ်နေ့အတွက် ကုန်တင်လေယာဉ် ၆၀ ကျော်အသင့်ပြင်ထား - Xinhua News Agency
SF လေကြောင်းလိုင်းက “၁၁၁၁” ဈေးဝယ်နေ့အတွက် ကုန်တင်လေယာဉ် ၆၀ ကျော်အသင့်ပြင်ထား
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော SF Airlines က နိုင်ငံအတွင်း အဓိကဈေးဝယ်နေ့မှ ပေါ်ထွက်လာမည့် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး တောင်းဆိုချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကုန်တင်လေယာဉ် အစင်းရေ ၆၀ ကျော် အသင့်ပြင်ထားကြောင်း ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်းက နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ကုန်တင်လေယာဉ်များအားလုံးသည် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် အွန်လိုင်းဈေးဝယ်နေ့ ဖြစ်သော “၁၁၁၁” နေ့ဝန်းကျင်၌ နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့သယ်ပို့ရေး အထွတ်အထိပ်ကာလ အတွင်း ထိရောက်သောလေကြောင်းပို့ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးရန် နေရာယူထားပြီဖြစ်ကြောင်း SF လေကြောင်းလိုင်းက ပြောခဲ့သည်။
ကုန်တင်လေယာဉ်များ အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်းသည် e-commerce အဓိကစုဝေးရာ နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဒေသများရှိ ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့် ဒေသများ ချိတ်ဆက်မှုရှိစေရန် လမ်းကြောင်းသစ် ၁၀ ခုကျော် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဆန်းကျိန့်၌ ရုံးချုပ်ဖွင့်ထားသော SF လေကြောင်းလိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ပစ္စည်းပို့လုပ်ငန်း SF Express ၏ လေကြောင်းလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်းသည် ကုန်တင်လေယာဉ် ၆၇ စင်းပါဝင်သော အစုအဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်နေရာ ၈၃ ခုသို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ e-commerce ထောက်ပို့ကဏ္ဍသည် အောက်တိုဘာ လလယ်ပိုင်းက အလယ်အလတ်မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်လမှစ၍ ၁၁၁.၅ ပွိုင့်၊ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ထောက်ပံ့သယ်ပို့ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် e-commerce လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သော JD.com တို့က ပူးတွဲထုတ်ပြန်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုစစ်တမ်းအရ သိရသည်။
အဆိုပါ လေ့လာမှုစစ်တမ်းက e-commerce ထောက်ပို့ကဏ္ဍအတွက် တောင်းဆိုချက်သည် “၁၁၁၁” ဈေးဝယ်နေ့ရှိသော နိုဝင်ဘာလတွင် ဆက်လက်မြင့်တက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
SF Airlines deploys over 60 freighters for “Double 11” shopping spree
BEIJING, Nov. 10 (Xinhua) — SF Airlines, China’s largest air cargo carrier, has deployed more than 60 freighters to serve the rocketing express delivery demands from the country’s major shopping spree, according to the cargo airline on Wednesday.
These all-cargo freighters are in place to ensure efficient air delivery during the annual logistics peak around the “Double 11” online shopping spree on Nov. 11, said SF Airlines.
Alongside deploying freighter capacity, the cargo airline has also added more than 10 new routes to meet demands and link diverse regions with the country’s eastern region,amajor cluster of e-commerce.
Headquartered in Shenzhen, SF Airlines is the aviation branch of China’s delivery giant SF Express. The cargo airline now operatesafleet of 67 all-cargo freighters andaglobal network reaching 83 destinations at home and abroad.
China’s e-commerce logistics sector reported moderate growth in October with the index tracking e-commerce logistics activities rising to 111.5 points, up 0.3 percentage points from the previous month, according to an industry survey jointly conducted by the China Federation of Logistics and Purchasing and e-commerce giant JD.com.
The survey predicted that demand for e-commerce logistics would continue to increase in November, influenced by the “Double 11” shopping spree. ■
Photo : A plane of SF Airlines Co., Ltd. takes off at Bao’an International Airport in Shenzhen, south China’s Guangdong Province, Sept. 10, 2020. (Xinhua/Mao Siqian)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောဒုစရိုက်မှု အဓိကစစ်ဆင်ရေးအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့် သံသယရှိသူများ ဖမ်းဆီးရမိ